Jinx ( 2013 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel February 18, 2017
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2013 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိတဲ့ Japan ဇာတ်ကားလေးပါ ...
ဇာတ်အိမ်လေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါပဲ ... လူငယ်ကြိုက် Drama / Romance ပုံစံ ဇာတ်လမ်းမျိုးလေးပါ ...
ဂျီဟို က ကိုရီးယား သူလေးတစ်ယောက်ပေါ့ ... သူမ ချစ်သူ ထယ်ဝန်း နဲ့ သူ နဲ့က တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အရမ်းချစ်ကြပြီး ... အရမ်း romance ဆန်တဲ့ စုံတွဲလေးပါ ... သူတို့နှစ်ဦးဟာ ချစ်သူသက်တမ်း anni တစ်ခုပြည့်တိုင်း သူတို့ သဘောကျနှစ်ခြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲက romance ဆန်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ပြန်လည်သရုပ်ဆောင် ဖြစ်ကြပါတယ် ... ပြောရရင်တော့ အရမ်းကို romance ဆန်ပြီး ချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲပေါ့ ... ဒါပေမဲ့လဲ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ anniversary date တစ်ခုမှာ '' Honeymoon on Ice '' ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက romance ဆန်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ပြန်လည်သရုပ်ဆောင်ဖို့ ချိန်းထားတဲ့နေ့မှာ ထယ်ဝန်း က ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးပါးသွားရပါတယ် ...
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဂျီဟို က ကိုရီးယားမှာဆိုရင် ထယ်ဝန်း ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကြောင့် အတိတ်ကို မမေ့နိုင်ပဲ ပူဆွေးမနေချင်တာကြောင့် ဂျပန်ကို ပညာတော်သင်သွားခဲ့ပါတယ် ... ဂျပန်ရောက်တော့ အမြဲတစ်ယောက်တည်း သီးသန့်နေပြီး အေးတိအေးစက်နေတတ်တဲ့ ဂျပန်မလေး ကာအဲဒဲ့ နဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့ပါတယ် ... ဂျပန်မလေး နဲ့ ဂျီဟို တို့ရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ် / သွေးအုပ်စု တို့က လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အတွဲတွေမို့ Jinx လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ် ... အဲ့လိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့ Jinx တွေဆီကို ကောင်းသောအရာတွေပဲ ဖြစ်လာတတ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါသေးတယ် ...
ဂျပန် မလေး ကာအဲဒဲ့ မှာလဲ crush ရှိတယ်ဗျ ... ဂျပန်မလေးရဲ့ crush နာမည်က ရုစကီ လို့ ခေါ်ပါတယ် ... ရုစကီ ကလဲ ပြန် crush ပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ နှစ်ယောက်လုံးက အူတူတူ အတတ တွေဆိုတော့ ကိုယ့်အချစ်ကိုယ် ထုတ်ဖော်မပြတတ်ကြဘူး ... crush ကြတာကလဲ အခုမှ ဟုတ်ဘူးနော် ... အလယ်တန်း ကနေ ကောလိပ် ထိ ...
အဲလို တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်လိုဖွင့်ပြောရမယ်မှန်း မသိပဲ romance မဆန်တတ်တဲ့ ရုစကီ နဲ့ ကာအဲဒဲ့ ကြား ဆရာမကြီး ဝင်လုပ်မှာက ကိုရီးယား က romance ဆရာမကြီး ဂျီဟို ... ဂျီဟို က ဘယ်လိုတွေ ဆရာဝင်လုပ်မလဲ ? ဘယ်လိုတွေ ရိုဆန်တတ်အောင် သင်ပေးမလဲ ? ဆိုတာကိုတော့ '' Jinx '' ဆိုတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှု လိုက်ပြါနော်က ... ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမှာ ဟာသလေးတွေ romance ဆန်ဆန်လေးတွေကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ ...
သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ - ရုစကီ အဖြစ် Yamazaki Kento , ကာအဲဒဲ့ အဖြစ် မင်းသမီး Kurumi Shimizu နဲ့ ကိုရီးယားသူလေး ဂျီဟို အဖြစ် KPop girl group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ T-ara အဖွဲ့မှ Hyomin တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
Rating အနေနဲ့ကတော့ IMDb မှာ 7.5/10 ရရှိထားပါတယ် ... ပေါ့ပါးပါး Drama / Romance ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့် အားလပ်ရက် စနေနေ့ညမှာ အပျင်းပြေ ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် ...
File Size - 833 MB
Download on Openload Link
Labels: Drama Japan Romance